मस्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरेर सफल भएपछि डाक्टरले यसो भनेका थिए, तर बाँचेनन् म्याराडोना – Khabar PatrikaNp
November 26, 2020 208
काठमाडौं – महान अर्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ । ६० वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो। अर्जेन्टिनी संचारमाध्यमका अनुसार हृदयघातका कारण बुधबार उनको निधन भएको हो । दुई साताअघि मात्र अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्स नजिकको अस्पताल ला प्लाटामा मंगलबार म्यारोडोनाको मस्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो । ६० वर्षीय म्याराडोनाको सिटी स्क्यानको नतिजापछि उनको मस्तिष्कमा ब्लड क्लट देखिएको थियो ।
सफल शल्यक्रियापछि म्याराडोना एक साता अस्पतालमै रहेर आराम गरेका थिए । अघिल्लो महिना मात्र उनले ६०औं जन्मदिन मनाएका थिए । अर्जेन्टिनी टोली जिम्नासिया ला प्लाटाको प्रशिक्षकका रुपमा रहेका उनले ३० अक्टोवरमा प्यात्रोनाटोविरुद्धको खेलमा ३–० को जित दिलाएका थिए । उक्त खेलमा उनले आफुलाई अस्वस्थ महसुस गर्दै चाँडै नै टचलाईन छाडेका थिए ।
यसअघि म्याराडोना कोरोना भाइरसको कारण सेल्फ आइसोलेसनमा रहेका थिए । उनको बडीगार्डलाई कोरोना देखिएपछि उनी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका थिए । म्याराडोनाले ६०औं जन्म दिन समेत आइसोलेसनमा मनाएका थिए ।
उनको शल्यक्रिया सफल भएको उनका चिकित्शकले जानकारी दिएका थिए। रक्तअल्पता र डिहाइड्रेशन भएपछि उनलाई गत सोमबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। म्याराडोनाका व्यक्तिगत डाक्टर लेइपोल्डो लुकिका अनुसार उनको सामान्य शल्यक्रिया गरिएको बताएका थिए। उनले म्याराडोनाको स्वास्थ्य अवस्था नियन्त्रणमा रहेको उनले बताएका थिए। अर्जेन्टाइन क्लब जिम्नासियाका प्रशिक्षक म्याराडोना गत शुक्रबार सार्वजनिक रुपमा देखिएका थिए।
उनको ६०औं जन्मदिनको अवसरमा क्लबले उनलाई सम्मान पत्र दिएको थियो। पैत्रोनातोविरुद्धको खेलअघि उक्त सम्मान दिइएको थियो। तर खेलका लागि म्याराडोना मैदानमा बसेका थिएनन्। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि उनी खेलका लागि नबसेको बताइएको छ।
बेलाबेला बिरामी भइराख्ने म्याराडोना यसअघि जनावरी २०१९ मा पनि अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यतिबेला उनको पेटमा समस्या देखिएको थियो। महान् फुटबलरको दर्जा पाएका म्याराडोनाको एकल प्रदर्शनमा अर्जेन्टिनाले सन् १९८६ को विश्वकप जित्न सफल भएको थियो।
उनले इटालीको सिरिया क्लब नेपोलीलाई दुई पल्ट लिग उपाधि जिताएका थिए। उनी बार्सिलोना, सेभिया र बोका जुनियर्स क्लबबाट पनि देखा परे। उनी र ब्राजिलका विख्यात स्ट्राइकर पेलेबीच उत्कृष्टताको होड अहिले पनि जारी छ। खेल जीवनमा म्याराडोना थुप्रै पल्ट विवादमा परेका थिए। उनलाई कोकिन प्रयोग गरेको आरोपमा १५ महिना प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। उनीमाथि १९९४ को विश्वकपमा शक्तिवर्धक ‘ला’ गु औ’ष’ध प्र’योग गरेको आरोप लागेको थियो। १९८६ को विश्वकपमा इङ्ल्यान्डविरुद्ध उनले हातले गरेको गोल अहिले पनि ‘ह्याण्ड अफ गड’ को रुपमा चर्चित छ।
उनले सन् १९७७ देखि सन् १९९४ सम्म अर्जेन्टिनाका लागि ९१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका थिए। यसैगरी उनी अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टोलीका पूर्वप्रशिक्षक पनि हुन्। उनले सन् २००८ देखि सन् २०१० सम्म अर्जेन्टिनी टोलीको प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पछिल्लोपटक उनले संयुक्त अरब इमिरेट्सको क्लब अल फुजाइरहमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। म्याराडोनाले अर्जेन्टिनोस जुनियर्स, बोका जुनियर्स, स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र इटालियन क्लब नापोली लगायतबाट व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए। देशका लागि सन् १९८६ मा विश्वकप जितेका म्याराडोनाले सन् २०१० को विश्वकपमा भने अर्जेन्टिनी टोलीको प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
म्याराडोनालाई पहिलोपटक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता लिँदै भविष्यको योजनाबारे सोध्यो। म्याराडोनाले सहज पाराले जवाफ दिँदै भनेका थिए, “राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै विश्वकप उपाधि जित्नु मेरो कल्पना, सपना र जपना हो ।” नभन्दै २६ वर्षको उमेरमा सन् १९८६मा उनले झन्डै आफू एक्लैको भरमा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप उपाधि जिताइछाडे। त्यो विश्वकपलाई ‘कोपा म्याराडोना’ अर्थात् म्याराडोनाको विश्वकप भन्ने गरएिको छ। चार वर्षपछि उनकै नेतृत्वमा अर्जेन्टिना फेर िएकपटक विश्वकपको फाइनलमा पुग्न सफल भएको थियो। स्पेनको बार्सिलोना क्लबमा उनी सधैँ सम्मानित छन् । अझ, उनी लामो समयसम्म आबद्ध रहेको इटालीको नेपोली क्लब त उनलाई आफ्नो भगवान् नै मान्छ ।
Prevप्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल सपना भन्छिन्, मोबाइल र सिक्री बन्धकी राखेर पनि शव जलाएको छुः (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextआलुमा गुलाब छेडेर राख्नुहोस् : एक हप्तापछि मात्र हेर्नुहोस् देख्नुहुनेछ चमत्कार !!!
भगवान जस्तै श्रीमान बिनोदलाई सबैले अर्की बिहे गर मर्छे भन्थे,छोरी सम्झेर रोइन अनिता ! ( भिडियो )
घरमा सँधै सुख शान्ति हुन यी ८ कुरामा ध्यान दिुनुस् !
कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नै प्रस्ताव, विचाराधीन अवस्थामा
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33664)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33341)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27308)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25157)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (20537)